Ndụmọdụ nchekwa maka ichedo ndị ọrụ Lone (A10001) | Singapore Top Mini GPS Personal Tracker maka Autism / Autistic Kids & Dementia okenye
Onye ọrụ Lone bụ onye na-arụ ọrụ naanị ya, na-anọ n'ụlọ ọrụ nkịtị na-enweghị nso ma ọ bụ na-eduzi ya ma na-arụ ọrụ na mpaghara kachasị dị ize ndụ dịka owuwu, akụrụngwa, ahụike, mmanye ma ọ bụ ụgbọ njem. Enwere ụzọ abụọ nke ndị ọrụ naanị mmadụ. Nke mbu, bu ndi n’aru oru n’enye ha ma obu ndi ha nyere ha; Ndị na-arụ ọrụ n'ime ụlọ azụmaahịa ya Nke abuo, bu ndi nwere ije; ndị ọrụ na-ahụ maka ekwentị na-anọ n'ime ime obodo ma na-arụ ọrụ na mpụga nke ebe azụmaahịa. N'ihe gbasara Iwu & usoro dị mkpa ọ bụ ọrụ dịịrị nzukọ a ịnye ndị ọrụ naanị ha ọrụ nchekwa. N'ebe a, anyị ga-atụle ihe ize ndụ a na-ejikọkarị na ndị ọrụ owu na-ama, otu ụlọ ọrụ dị ugbu a si hụ na nchekwa nke ndị ọrụ na ụzọ ọhụrụ maka nsogbu ndị a siri ike.
Ihe ọghọm ndị a na-ahụkarị Ndị Ọrụ Lone
Mpempe ma ọ bụ ọdịda dị ize ndụ: Ọ na --emekarị mgbe onye na - arụ ọrụ naanị ya na - arụ ọrụ na - apagharị, akwa dị larịị, ubube ma ọ bụ n'ịdị elu. Isi ihe kpatara ọdịda ahụ nwere ike ịbụ mgbochi mmiri, steepụ na steepụ, daba na ime ụlọ ịwụ ahụ wee mebie elu. Ihe ozo puru ibu omume na-adighi nma, dika ima atu, ikpu akpụkpọ ụkwụ na-achọghị iguzogide n’ebe ọrụ nke nwere ike ibute n’elu iru n’elu ihe atụ ọzọ enweghị ike ịnwe nchekwa mgbe ị na-arụ ọrụ n’elu.
Ihe mberede ahụike: Ihe mberede kacha emetụta ahụike ndị na-anọ naanị ya bụ nkụchi obi na ọrịa strok nke nwere ike ibu nnukwu nsogbu metụtara ahụike ma ọ bụrụ na enyeghị enyemaka mbụ. N'ime nsogbu nke nrụgide metụtara ọrụ; Nsogbu ihe nlere bu ihe di egwu karie. Ihe isi ike dị egwu bụ ihe ọghọm, mmerụ ahụ ma ọ bụ ihe ọ bụla nwere ike ime n'ebe ọrụ nwere ike ibutere mmadụ obi mgbawa. Karịsịa na ndị ọrụ naanị nrụgide siri ike nwere ike ibute nnukwu ihe ọghọm.
Ike ime ihe ike: Mgbe otu onye ọrụ na-arụ ọrụ n'ime mpaghara dịpụrụ adịpụ enwere ohere onye otu sitere na ọha na eze nwere ike ịgbanye ya ma mebie ya yana nzukọ enweghị ike ịzaghachi n'oge ahụ. Ihe ike ndị ọzọ na-arụ ọrụ nwere ike ịbụ mkpọtụ na-abịa site na ọrụ nke mmadụ a nwere ike inwe ọrịa ma ọ bụ tufuo ikike ige ntị ya.
Ọkụ na gbawara: Ndị na-arụ ọrụ na-egwu ala ma ọ bụ na-emeso ihe metụtara ọkụ eletrik anya; ha nwere ike bụrụ ndị ọgbụgba na ọkụ gbawaranụ. Enwere ike belata nke a site na iji ezigbo ngwaọrụ & ịgbasochi SOP. Agbanyeghị, ọkụ bụ ihe na - anyụ anyụ anyụ nke nwere ike ibute mgbawa ma ndị na - enweghị ọrụ enweghị ike ịnagide ọnọdụ a naanị. Ekwesịrị ịzụ ndị ọrụ na-agba ọtọ iji nwee ike ịnagide ụdị ihe a.
N ekpughe kemịkal: Ndị ọrụ na-arụ ọrụ n'ụlọ nyocha ahụ na-ahụkarị kemịkalụ nke nwere ike ibute nsogbu nke nsogbu ahụike siri ike karị iku ume.
Ọnọdụ ugbu a: Kedu ka ụlọ ọrụ ahụ si arụ ọrụ nchekwa nke Ndị Ọrụ Lone:
Ugbu a, ụlọ ọrụ na-eji ụzọ dị iche iche iji mesoo ihe egwu ndị ọrụ nkịtị na-eche ihu. Nke mbu, usoro a na - achokariri bu inye ha ihe nchedo nke onwe (PPEs) nke puru inyere ha aka inagide onodu ndi n’achoghi. Nke abuo, ndi otu ji akara nke nkwurita okwu ekwughi okwu iji zere ihe ojoo obula ya bu mgbe ala dicha, ha na edobe ebe ahu otu aka ahu mgbe mmiri di na ulo oru, ha nwere ihe omuma nke ihe ojoo. Na mgbakwunye na nzukọ ndị ahụ na-aga maka nleta na mkparịta ụka mgbe niile site na redio na ekwentị bụ ụzọ ndị a na-ahụkarị maka ọnọdụ ahụ. A na-eji usoro a niile na-eme ihe n'ofe otu iji mee ka ndị ọrụ ha gbakwunye ebe obibi dị mma na gburugburu ebe obibi. Ma dịka ụwa na - agbanwe; ya mere, ka usoro dị nso na usoro iji gbochie ọnọdụ ndị a achọghị. iHelp bụ ngwụcha otu nkwụsị maka nchegbu gị niile echebarala. Ngwaahịa anyị iHelp ọ bụghị naanị na-enye ihe ngwọta maka nsogbu ndị a kamakwa ọ na-enwe mmekọrịta enyi na enyi. Iswa na-agbanwe, mmasị na-agbanwe, ekwesighi ka anyị gbanwee? iHelp nwere ike ime ka nsogbu metụtara ọrụ gị dịkwuo nfe ma dịkwa mfe; Nwee nkọwa dị nkenke n'okpuru;
iHelp - Man Down Sistemu - Ngwọta Nchedo Ọrụ Ọrụ
Ọ bụ ngwaọrụ GPS GPS kachasị ntakịrị n'ụwa na-enye ngwugwu zuru ezu nke ndị ọrụ owu na-ama. Ọ na - abịa na sim ma tinyekwa GPS Tracker nke ga - enye gị ọnọdụ ileba anya nke ndị ọrụ naanị ya. Ewezuga nke ahụ, ọ nwere ihe nchọpụta nchọpụta ọdịda yana nke na-eziga nlezianya ọdịda maka ndị nlegide. Ọ na-enyekwa gị ngwa ekwentị n'efu nke ị nwere ike inyocha ndị ọrụ naanị gị. May nwere ike ịnọ n ’otu ngwaọrụ a si arụ ọrụ. Ọ bụrụ na onye ọrụ naanị ya nọ n'ihe ize ndụ, ọ nwere ike pịa bọtịnụ dị na ngwaọrụ nke ga-eziga ozi nwere ọnọdụ ma kpọọ gị. Nke abuo, oburu na mmadu daa site na Height ya sensọ algorithm gha ezitere gi ozi akpaka nke gunyere ebe onodu ya. Agbanyeghị, ị nwekwara ike ịtọ ebe ụfọdụ maka onye ọrụ ma ọ bụrụ na ọ gafee mpaghara ahụ ozi ka aga-ezitere gị ọnọdụ ya. Ọ na - enyere gị aka isoro onye ọrụ naanị gị na - enwe nkwukọrịta okwu ụzọ abụọ, site na nke a ị nwere ike ịgwa ha okwu ma mara ụdị ọnọdụ ha na - eche ihu. O nwekwara njirimara site na inwere ike lelee ebe akụkọ ihe mere eme nke onye ọrụ naanị site na nke a ị nwere ike ịma ebe ọ nọ na-arụ ọrụ n'oge gara aga. Na nkenke, ọ na-enye ngwọta gị zuru oke iji nyochaa ndị ọrụ owu na-ebelata ma belata ihe ize ndụ kachasị na-emetụta ndị ọrụ owu.
Nzuzo 2598 3 Echiche Taa
Ndụmọdụ gbasara iji Tracker GPS iji jide Onye Na-adịghị Eme Ihe n'Eziokwu…